Iraimbilanja: hanamarika ny 35 taony | NewsMada
Iraimbilanja: hanamarika ny 35 taony
Mankalaza ny 35 taona nijoroany ny tarika Iraimbilanja, amin’ity taona ity. Lehibe indrindra amin’ireo hetsika « cabaret », hotanterahina hanamarihana izany, ny amin’ny zoma izao etsy amin’ny Dôme Ankorondrano, manomboka amin’ny 9 ora alina.
Ho matihanina tanteraka ny fampisehoana, araka ny fanazavan’ny mpikarakara, ny AtmosFeerik. Ho hita taratra izany amin’ny fandrindrana ankapobeny, ny haingon-tsehatra ary amin’ny fanamafisam-peo. Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy, tamin’iny herinandro lasa iny, tetsy amin’ny IKM Antsahavola, ity fanombohan’ny fankalazana ny faha-35 taon’ny tarika Iraimbilanja ity.
Fantatra, nandritra izany, koa fa haharitra ora telo ny fampisehoana ary hokaloin’ny tarika Iraimbilanja avokoa ireo hira ahafantaran’ny maro azy hatramin’izay. Tsy ho diso anjara amin’izao fanamarihan’ny tarika ny tsingerintaony izao ny mpankafy any amin’ny faritra, araka ny fanazavan’izy ireo hatrany. Hisy, araka izany, ny fitetezana toerana samihafa, aorian’ity etsy amin’ny Dôme Ankorondrano ity.
I Niry, i Batata, i Roger, i Papay, i Dera ary i Niry Kely. Ireo ny mpikambana nanorina ny tarika Iraimbilanja, tany amin’ny taona 1983 tany. Anisan’ireo nitondra sy nanaparitaka fironana amin’ny mozika rock izy ireo. Azo lazaina ho nanan-tantara mihitsy izany tarika Iraimbilanja izany ary anisan’ny nampiavaka azy ireo ny fivoizana hira miady amin’ny fanimbana ny tontolo iainana.